Izinhlelo zokunqanda inkohlakalo ku-ANC | IOL Isolezwe
Izinhlelo zokunqanda inkohlakalo ku-ANC
Isolezwe / 21 December 2012, 2:18pm /
UMNUZ David Makhura
IQEMBU elibusayo i-African National Congress, selinqume ukusungula ikomiti elizobheka ubuqotho babaholi abazotshalwa ezikhundleni ezehlukene nasemazingeni wonke kahulumeni ukunqanda inkohlakalo. Lokhu likwenze emuva kokuzinuka amakhwapha engqungqutheleni kazwelonke ka-53 ebiseMangaung kuleli sonto.
Le ngqungquthela ebihanjelwe yizithunywa ezibalelwa ku-4 500 eziphuma kuwo wonke amagatsha, ikuvumile ukuthi ubungekho umgomo olawula ukutshalwa kwamalungu alo mbutho ezinhlakeni ezehlukene. I-ANC imemezele ukuthi isibhabhadise umgomo ozobizwa ngeCadre Policy, nokuyiwona ozoqinisekisa ukuthi umuntu wayo othunywa noma yikusiphi isikhundla embuthweni nakuhulumeni kanjalo nakumasipala nasezinkampanini ezingaphansi kukahulumeni, ngabantu abanamakhono afanele lowo mkhakha abathunywa kuwona.
Iphinde yamemezela ukuthi ingqungquthela inqume ukuba kusungulwe ikomiti elizobizwa nge-Intergrity Committee, elizoba sezingeni likazwelonke nasezifundazweni, okuyilona elizoqapha ubuqotho kubaholi baKhongolose kuzo zonke izinhlaka kusukela embuthweni kuya kuhulumeni nakomasipala.
Le nhlangano ikusho lokhu ebusuku ngoLwesithathu emuva kokuphothula ukudingida umgomo wokubuyekezwa kabusha kwale nhlangano. UNobhala kaKhongolose eGauteng uMnuz David Makhura, uthi lokhu kuzoba yingxenye yezinhlelo zeminyaka engamashumi amabili ezayo okuhloswe ngayo ukuphucula i-ANC ukuze ihambisane nezibopho zayo zobuqotho, ukulwa nenkohlakalo, ukuba sebantwini nokuzwelana nabantu ngaso sonke isikhathi. Uthe ingqungquthela ivumelene ngokuthi leli hlandla leminyaka engu-20 yesibili yenkululeko lizobizwa ngeSecond phase of the Transition.
“Ingqungquthela ibhabhadise okunigi eyayixoxe ngakho ngoJuni engqungqutheleni yemigomo. Kuncane kakhulu okusha okuqhamukile la eMangaung. Udaba lokuqeqeshwa kwawo wonke amalungu ombutho kube seqhulwini. Injongo ka-ANC wukuthi kule minyaka engamashumi amabili ezayo wonke amalungu akhe ebe eseqeqeshiwe ngokwezombusazwe, ukuphatha uhulumeni, kanjalo nokuqeqeshwa kwezezimali kwalabo abasuke bezothunywa kuhulumeni. Sinamakhansela amaningi angaqeqeshiwe ngokwezimali kodwa athatha izinqumo ezinkulu nezinomthelela omkhulu kabi ezimalini kodwa ebe engazi. Lokhu kumele kuphele ngokuthi aqeqeshwe. Nawo wonke amalungu amasha azojoyina umbutho azoqeqeshwa kabanzi ngezibopho nombono nokuphokophela kwe-ANC. Ukuqeqeshwa okunzulu kuzophinde kugxile futhi nasophikweni lwentsha, okuyilona okumele lube wumthombo wokuphakela i-ANC, ngabaholi bakusasa,” kusho uMakhura.
Uthe ingqungquthela ithume isigungu esiphezulu esisha ukuba ezinyangeni ezintathu sakhe i-Intergrity Committee. “Okunye okubekwe yingqungquthela wukuthi umthetho-sisekelo kumele ulokhu uqiniswa ikakhulukazi esigabeni sokuziphatha. Kwikota yokuqala yonyaka ozayo lesi sigungu sithunywe ukuba sibumbe ibhukwana elinemigomo yokuziphatha kwamalungu bese liyashicilelwa,” kusho uMakhura.
Yile khomishana ebibizwa nge-Organisational Renewal ephinde yabheka iziphakamiso ezishubise ingqungquthela njengoba phambilini kwake kwaba nesiphakamiso sokuthi izimpiko akumele zibe noMengameli kodwa kumele babizwe ngoSihlalo bakaZwelonke. “Sikudingide kabanzi lokhu kule khomishana nengqungquthela yakubhabhadisa ukuthi izimpiko azingashintshi kodwa kumele ziqiniswe ukuze zenze umsebenzi ezasungulelwa wona okuwukuphakela umbutho omkhulu ngamalungu asevuthiwe kulezi zinhlaka okuwuphiko lwentsha nolwabesifazane,” kusho uMakhura. Olunye udaba olungene kule khomishana olwesibalo samalungu esigungu esiphezulu obekuhlongozwe ukuthi singase sincishiswe kodwa ingqungquthela yathi silungile singu-80.
UMakhura uthi konke lokhu nokunye ngeke kwenzeke ngesikhathi esincane yingakho bekudidiyele ndawonye ezinhlelweni zeminyaka engu-20 kusukela ngenyanga ezayo.